Eli Roth Kutungamira Killer Shark Movie MEG - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Eli Roth Ari Kutungamira Killer Shark Movie MEG
Eli Roth Ari Kutungamira Killer Shark Movie MEG
by arun June 16, 2015
by arun June 16, 2015 456 maonero
Svondo rino zvinoratidza makore makumi mana ekuberekwa shaya, Izvo zvakatanga kubudiswa mu dzemitambo musi June rechi20, 1975. The Spielberg Classic anodzokera kumitambo vhiki ino mukupemberera, uye izvozvi zvinoita sekunge tave kuzove nemuchina mutsva wemhondi shark bhaisikopo kuti unakirwe pachiratidziro chikuru.
Kusiyana-siyana akaputsa nhau dzinonakidza manheru ano kuti Kabhini Fever/Hostel director Eli Roth ari muhurukuro kutungamira kuchinjiswa kweiyo New York Times inotengesa zvakanyanya Meg: Novel Yekutyisa Kwakadzika yeWarner Bros., chirongwa cherefu-chekuita icho chave chiri mumatanho akasiyana-siyana ebudiriro kweanoda kusvika makumi maviri emakore.
Iri bhuku, rakanyorwa naSteve Alten, ndere nezve rakakura prehistoric shark. Iyo nyaya inotenderera kutenderera nevarume vaviri vanobatana pamwechete kuti vadzikise shark yekare iri kutyisidzira gungwa reCalifornia. Megaladon, inofungidzirwa seimwe yezvikara zvikuru uye zvine simba kwazvo munhoroondo, inogona kusvika pakureba kusvika pamamita makumi matanhatu.
Vaviri Disney neNew Line Cinema vakamboedza kuyedza Novel yaAlten, uye pane imwe nguva Guillermo del Toro yakabatanidzwa. Chinyorwa chitsva ichi chakanyorwa naDean Georgaris, uye aingova mavhiki mashoma kumashure kwatakadzidza kuti Warner Bros.anga achiisa shanduko pane yekukurumidza-track.
Meg yakatsanangurwa se "Jurassic Park ine shark, ”Saka isu tinogona chete kufungidzira kuti rekodhi-kupwanya kubudirira kwe Jurassic World ine chimwe chinhu chidiki chekuita nechiziviso chanhasi. Vafudzi venyaya vane makore vachifunga kuti kuchinjika kunogona kuita kuti mashark atye zvakare, uye ndiri kufunga kuti Roth ndiye murume akakwana pabasa.
Izvi ndizvo zvandinodaidza kuti good news, shamwari.